I-COVID-19: Isikhathi sokuthatha isayensi ngokungathi sína - AfricArXiv
Kushicilelwe ngu UMahmoud Bukar Maina, inethiwekhi ye-African Science Literacy Network on I-5th Ngo-Ephreli 2020 I-5th Ngo-Ephreli 2020
[ishicilelwe ekuqaleni ku- izindabadiaryonline.com/…/]
Umqedazwe we-COVID-19 (Coronavirus) ungenye yezinkinga ezimbi kakhulu zesikhathi sethu. Njengamanje, abantu abangaphezu kwesigidi esisodwa sebengenwe yileli gciwane, nokufa kwabantu abangaphezu kuka-60 000. Le nkinga isijikijele ngisho namazwe athuthuke kakhulu ezinxushunxushweni, eza emhlabeni wonke umnotho kanzima, okwaholela ekumisweni komhlaba wonke kwemisebenzi eminingi (isib. Ezemidlalo), ukuvalwa kwemizi, ukuhlala kwabantu abanethonya kakhulu, isib. UNdunankulu waseBrithani. Ngenxa yalokhu, izwe manje selibheke kososayensi ukuthola isixazululo sesikhathi eside. Iningi lamazwe athuthukile kuncike izeluleko zesayensi ekwakheni izinqubomgomo zabo ukunciphisa noma ukunciphisa ijubane ukuthunyelwa kwe-COVID-19 ukuze kungaphazamisi izinhlelo zabo zezempilo. Ngenkathi amazwe eqhubeka nokusebenzisa izindlela “thambisa ijika', umhlaba ubheke kakhulu futhi ulinde ososayensi ukuthi bakhe imijovo noma umuthi wokumisa lo bhubhane.
Ngeshwa, eNigeria, ososayensi ababukelwa phansi. Ngetulu kwaloko, kunelizinga leliphakeme lemibono lemibi mayelana nendzima bososayensi. Imvamisa, abantu badida ososayensi nodokotela. Ngenkathi bobabili bangafana kwezinye izimo, ezimweni eziningi, badlala izindima ezihlukile. Futhi ngenkathi abezokwelapha bedlala indima ebaluleke kakhulu kuzo zonke izici zempilo yabantu, le ndatshana imayelana nezisombululo eziqhutshwa yisayensi. Uma kunesifundo esisodwa sonke okufanele sisifunde kulolu bhubhane lwe-COVID-19, ukuthi kudingeka sisekele isayensi! Lapha ngifingqa izizathu zami nokunye ukuvalwa komgwaqo okuthinta isayensi eNigeria.
Amasu we-COVID-19 wamanje ukuthenga isikhathi ngaphambi kokuba ososayensi bathole isisombululo sesikhathi eside
Empini yamanje ne-COVID-19, elinye lamasu abalulekile anconywe yi-World Health Organisation (WHO), ukuvivinya abantu abaningi ngangokunokwenzeka. Isizathu sokwenza lokhu ukuthi khomba ,hlukanisa, thinta abantu ngokulandela nalesi sifo futhi uhlele ukuthi bathole ukunakekelwa okudingekayo, ngaleyo ndlela kuncishiswe ukwanda kwaleli gciwane. Ukuhlolwa ngeke kumise ukusakazeka kwaleli gciwane, kepha kuzokwenza amazwe ukuthi aqukethe ukusakazeka kwaleli gciwane futhi ngenxa yalokho anciphise umthelela osheshayo ohlelweni lwezempilo olungabangelwa ukwanda kwesibalo sabantu abathelelekile ngasikhathi sinye. Leliqhinga lizosiza uhlelo lwezempilo ukuthi luqhubeke nokuhlinzeka ukwesekwa ngaphambi kokusebenza umuthi wokugoma, noma umuthi kukhiqizwa ngocwaningo lwesayensi. Lokhu kugcizelela ukubaluleka kocwaningo lwesayensi!
Ngabe kufanele sincike eGlobal North?
Imijovo ye-COVID-19 okwamanje isakhiwa emazweni amaningi. Akukho okwenzekayo e-Sub-Saharan Africa. Njengokwejwayelekile izikhathi eziningi, silindele ososayensi abavela ku- "Global North" ukuthi bakhiqize imigomo esizogcina siyithenga, sicela noma silinde ukuthi ihlolwe njengezingulube zegiya njengoba kuhlelwe abanye Ososayensi baseFrance. Ngezikhathi zobunzima, abantu bathambekele ekuziboneni kuqala. NgoMashi, uMongameli uTrump uhlulekile ukuhlinzeka isamba esikhulu ukufinyelela okukhethekile kwe-US wokugomela i-COVID-19 okwamanje okwenziwa yinkampani yezokwelapha yaseJalimane. Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, wama inkampani ekhiqiza i-US evela ekuthumeleni ama-respirators eCanada. Lezi zibonelo kufanele zisebenze njengophawu lokuthi kudingeka sithuthukise amakhono ethu esayensi. Ngoba kungenzeka singalutholi njalo usizo lapho siludinga kakhulu uma sincika kwabanye ngaso sonke isikhathi. Noma imigomo ye-COVID-19 kanye nezidakamizwa ekugcineni yathuthukiswa futhi itholakala kuwo wonke umhlaba, njengesizwe, sizoba nezinye izinkinga ezingafani nathi (isib. Lassa fever). Ubani ozosilekelela uma singaluxhasi ucwaningo lwasekhaya ukulungisa ezinye zalezi zinkinga?
Kuyamangaza ukuthi uMnyango Wezesayensi Nobuchwepheshe ngoFebhuwari kumemezela ukuthi bazovuza izigidi ezingama-N36 kunoma yimuphi usosayensi owelapha ikhambi i-COVID-19 neLassa fever. Yize lokhu kuncomeka, ososayensi bangakwenza kanjani ukutholwa kwasekuqaleni ngaphandle kwelabhorethi enhle nemali ukwenza ucwaningo?
Kufanele sikhuphule ukusekela kwethu isayensi futhi sisekele ososayensi ukuthi benze ucwaningo
Ukuhola iqembu lososayensi base-Afrika abangaphezu kwe-10, ngonyaka owedlule thina kushicilelwe iphepha ku-European Journal of Neuroscience lapho sakhombisa khona ukuthi eminyakeni engama-20 eyedlule, bangama-8% kuphela abacwaningi abaqhutshwa ngabezokwelapha baseNigeria abasebenzise izindlela eziningi eziphambili "eziphambili" ezitholakala kalula kubacwaningi ngaphandle kwase-Afrika, njenge-polymerase chain reaction (PCR) , i-fluorescence noma i-electron microscopy, phakathi kwabanye. Ukubeka lokhu kubukhali, ngaphezu kwengxenye yeMiklomelo kaNobel eyaphumelela kuPhysology noma Medicine eminyakeni engamashumi amabili edlule isebenzisa izindlela ezinjalo zokucwaninga ezithuthukile. Ngaphezu kwalokho, lezi izindlela njengamanje ezisetshenziswa ososayensi ekuhloleni nasekuqondeni ukutheleleka kwe-COVID-19 nenqubo yezifo. Ukuxazulula izinkinga zethu zesayensi, kufanele senze utshalomali ukuhlomisa ama-laboratories aseNigeria ngamathuluzi ocwaningo anamuhla futhi sisekele ososayensi ngezimali zocwaningo.
Ngaphezu kwalokho, ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19, izinkulungwane zososayensi emhlabeni wonke banikela ngesikhathi sabo ukusiza ukunqoba leli gciwane, ngokwesibonelo, ngokwandisa amakhono okuhlola e-COVID-19. EJalimane, 500, 000 PCR ngesonto kwenziwa ukuvivinya umuntu ngamunye kwe-COVID-19. Ukube ama-laboratories ethu okucwaninga ngesayensi abefakiwe, ososayensi bethu bangasiza futhi kulezo zikhathi zokuzama ukusekela imizamo yethu eqhubekayo yokunqoba lo bhubhane.
Nikeza ososayensi isikhathi esengeziwe sokucwaninga
Futhi, enye yezinkinga ezibalulekile ezithinta ososayensi baseNigeria umthwalo omningi wokufundisa. EGlobal North, izikhundla zokufundisa nokucwaninga zivame ukuhlukaniswa. Ezimweni lapho lokhu kungenjalo, ososayensi banikezwa isikhathi esanele sokucwaninga kwabo. ENigeria, amanyuvesi amaningi agxila kakhulu ekufundiseni kunokucwaninga. Lokhu kusho ukuthi abafundile abasitholi isikhathi esidingakalayo sokwenza ucwaningo nokwenza okuthile. Lokhu kuthinta ukukhiqiza kanye nekhwalithi yocwaningo abalukhiqizayo. Kuze kube yilapho lokhu kushintsha, noma ngabe uhulumeni efaka enye imali ekucwaningeni, ososayensi ngeke bakwazi ukukhiqiza ngezinga elilindelwe. Lokhu wudaba okumele ludingidwe nguMnyango Wezemfundo.
UDkt Mahmoud Bukar kwelebhu yakhe yaseSussex University
Ukwenza imisebenzi yokuxhumana kwesayensi
Imvamisa nezikhathi ezinjalo zokuzama, imibono eyiphutha yesayensi kanye ne-disinformation iphezulu ngaso sonke isikhathi, ikakhulukazi kwezokuxhumana. Lokhu kufaka phakathi imibono yokusungula uzungu mayelana nomsuka we-COVID-19, ukwelashwa kwe-COVID-19 kusuka emithini yamakhambi engahloliwe nokuphika ubukhona begciwane. Ngokufanayo, ososayensi abambalwa baseNigeria basebenzise ngokungadingekile lokhu kudideka ngokuthi bathuthukise ikhambi le-COVID-19, ngaphandle kokwethula ubufakazi babo besayensi. Ngokombiko othile, uSolwazi waseNyuvesi uthe usethole ikhambi le-COVID-19. Kanjalo, "uphonsela inselelo noma yisiphi isikhungo sezempilo noma i-ejensi ukuletha noma yiluphi udaba lwe-coronavirus kuye futhi ubone ukuthi luzonyamalala kanjani ezinsukwini ezimbalwa. ” Lokhu akuyona indlela isayensi eyenziwa ngayo! Ukutholwa kwesayensi kumenyezelwa okokuqala ngezincwadi zesayensi, hhayi kwabezindaba. Noma yimuphi usosayensi ophuthuma kwabezindaba ukwenza izicelo ezinjalo ngaphandle kokudlula emphakathini wesayensi akufanele athathwe ngokungathi sína.
Ososayensi abaningi eGlobal North babandakanyeka ekuxhumaneni kwesayensi ukulungisa le mibono engamanga futhi inamanga. Kodwa-ke, njengamanje, ukuxhumana ngesayensi akubhekwa kakhulu ososayensi baseNigeria. Ezikhathini zokwesaba nokungaqiniseki okufana nesimo samanje, ososayensi baseNigeria bangamelana nale mibono engalungile kanye ne-disinformation emiphakathini yabo. Lokhu kuzosiza uhulumeni ekugcineni ukuthula nezimpilo zezakhamizi. Lokhu yingakho sethula ikhasi elinikezelwe i-COVID-19 kwiSayensi Yezokuxhumana Hub Nigeria (www.SciComNigeria.org) kanye ne-African Science Literacy Network (www.AfricanSciLit.org) ukulwa nemibono eyiphutha yesayensi ezilimini zesiNgisi nezasendaweni. Ukukhuthaza lokhu eNigeria, ukuxhumana kwezesayensi kudinga ukukhuthazeka. Isibonelo, kungenziwa ukuthi kube yingxenye yokuphakanyiswa kwezifundo, imfuno yezibonelelo zikazwelonke zokucwaninga kanye / noma ezokuxhumana zesayensi ezisebenzayo kufanele zamukelwe ngemiklomelo ngomsebenzi wabo nguhulumeni kanye nemiphakathi yezesayensi.
Ekuphetheni, inhlekelele ye-COVID-19 iqinisekisa futhi ukubaluleka kwesayensi nokuthi kungani kufanele siqhubeke nokweseka ososayensi. INigeria kufanele isebenzise lokhu njengesifundo ukwenza ngcono isimo sesayensi kuleliya lizwe futhi yeseke ososayensi bayo ukuthi benze ucwaningo olusezingeni lomhlaba. Izifo zizoqhubeka nokuhlasela. Ososayensi bayingxenye ebalulekile yokuzivikela kwethu kulokhu kuhlaselwa. Kumele sibaxhase ukuze bazilungiselele ngaso sonke isikhathi.
UMaina ungusosayensi waseNigeria, uthisha, futhi umcwaningi, osebenza e-University of Sussex e-United Kingdom. Ucwaningo lwakhe lugxile kwe-neurodegeneration. Ngaphezu kocwaningo lwakhe, uMahmoud ungumuntu othanda ukuxhumana nesayensi. Ungumsunguli weSayensi Yezokuxhumana i-Hub Nigeria ne-African Science Literacy Network lapho enza khona umsebenzi wokukhuthaza abantu abasha e-Afrika ukuba baphishekele isayensi futhi bakhulise ukuqonda komphakathi ngesayensi. Angafinyelelwa nge @sbahle_mpisane
Categories:	Covid-19Ezokuxhumana Kwesayensi